आमाबुबाको किरिया कर्म गर्दैछन् विवाहित छोरी
- रोश्ना सुब्बा | साेमबार, चैत २१
३७ दिन भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएपछि विनिता रञ्जितकी ७२ वर्षीया आमा अस्पतालमा बित्नुभयो । आमाको निधनको खबर सुनेर उनकी बहिनी बेहोस भइन् । उनी आफूलाई सम्हालिरहेकी थिइन् । उपचारका क्रममा आमाको स्वास्थ्य सुधार हुने आशा क्षिण हुँदै गएपछि उनी र उनकी बहिनीबीच दुईजनामध्ये एकले मृत्यु संस्कार गर्ने बारेमा कुरा भइसकेको थियो ।
आमालाई दागबत्ती कसले दिने भनेर उनका आफन्तबीच अस्पतालमा छलफल भयो । उनले आफूले दागबत्ती दिन्छु भनिन् । विवाहित छोरीले यसो गर्न मिल्दैन भनियो । किन मिल्दैन ? उनले प्रश्न गरिन् । उनको प्रश्नमा उनीहरूका गुर्जु (नेवारी समुदायका पुरेत)ले सहमति जनाए । विनिता रञ्जित भन्छिन्, ‘गुर्जुले विवाहित छोरीले मृत्युसंस्कार गर्न नहुने भन्ने कहाँ छ र ? भन्नुभयो । उहाँ एकदमै सकारात्मक भएर पूर्ण रूपमा साथ दिनुभयो । समर्थन गर्नुभयो ।’
तीन वर्षअघि विनिताका बुबाको निधन भएको थियो । त्यसबेला आमाले उनका बुबालाई दागबत्ती दिएकी थिइन् । ‘आमाले त आफ्नो श्रीमान्‌लाई दागबत्ती दिन सक्नुभयो । म पनि आमालाई दिन सक्छु, अन्तिम बिदाइ गर्न सक्छु भन्ने आँट आयो’, मातृवियोगको आलो सम्झनामा बरर्र आँसु बगाउँदै उनले भनिन् ।
पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय काठमाडौंकी प्रधानाध्यापक रहेकी विनिताकी अर्की बहिनी विदेशमा छिन् । उनीहरू तीन दिदीबहिनी छन् । तीनैजना विवाहित हुन् । दाजुभाइ छैनन् । आफूहरू मरेपछि कसले दागबत्ती दिन्छ, कसले पिण्डदान गर्छ, कसले श्राद्ध गर्छ भन्ने पीडा आमाबुबा जीवित छँदै उनले देखेकी थिइन् । छोरा छैन, मरेपछि तिमीहरू तर्दैनौ भनेर आमाबुबालाई आफन्तबाट मानसिक यातनासमेत दिने गरिएको उनलाई थाहा थियो ।
‘उहाँहरूमा छोरा नभएको पीडा थियो । शब्दमा व्यक्त त गर्नुहुन्नथ्यो । तर, मैले महसुस गरेकी थिएँ,’ विनिता भन्छिन्, ‘आफ्ना दाइभाइका छोराहरूले अन्तिम संस्कार गर्छन् भन्ने आशय बुबाको थियो ।’
छोरीहरूको माया र स्याहार पाउन थालेपछि विनिताका आमाबुबाले छोरा नभएकोमा चिन्ता गर्न छाड्न थाले । ‘हामीले सकेजति उहाँहरूको इच्छा पूरा गर्‍यौँ । उहाँहरूलाई समय दियौँ । बुबा बिरामी भएर दुई वर्ष थला पर्नुभयो । डेढ वर्ष त अस्पतालमै रहनुभयो । हामीले गरेको स्याहार देखेर छरछिमेकले उदाहरण दिन्थे । बुबा बितेपछि आमाले अझ बढी छोरीको महत्त्व महसुस गर्नुभयो,’ भावुक हुँदै विनिताले सुनाइन् ।
३ माघमा उनकी आमाको निधन भएको थियो । उनी आफैँ मासिक गर्छिन्, श्राद्ध गर्छिन् । स्वर्गीय आमाको नाममा मन्दिरमा बत्ती बाल्ने कार्य गरिरहेकी छिन् ।
मेरो स्कुल पढ्दादेखिकी साथीले पनि आमाको किरिया कर्म आफैँ गरिन् । उनलाई पनि विवाहित भएका कारण किरिया बस्न मिल्दैन भनिएको थियो । आफ्नी आमा र सासूआमालाई उनले काठमाडौंको आफ्नै घरमा राखेकी थिइन् । आमाको घरचाहिँ धरान हो । पक्षघात भएकी आमालाई आफैँसँग राखेर स्याहार गरिरहेकी थिइन् । १२ माघमा उनकै घरमा आमाको निधन भयो ।
आमाको पार्थिव शरीर साथीले धरान लगिन् । त्यहाँ काका वा ठूलो बुबाको छोरालाई किरिया बसाउने कुरा चलिरहेको थियो । तर, आमाबुबा हुँदाहुँदै कपाल खौरिन नमिल्ने भन्दै फेदाङ्मा (लिम्बू पुजारी)ले अरु नै कसैलाई खोज्न थाले । प्रायःजसो समुदायमा यसरी किरिया बस्न खेताला वा भाडामा खोज्ने गरिन्छ । उनले असहमति जनाउँदै आमाको किरिया आफैँ बस्ने अडान लिइन् । उनी कपाल खौरिन तयार थिइन् । फेदाङ्मा मानेनन् । 'मैले मेरी आमाको किरिया गर्न किन मिल्दैन ?' उनले प्रश्न गरिन् ।
‘फेदाङ्मा रिसाउनुभयो । मेरो प्रश्नमा, मेरो अडानमा उहाँ खुसी हुनुहुन्नथ्यो । अन्ततः अविवाहित दिदीले किरिया गर्नुपर्नेमा पुग्नुभयो,’ उनी सुनाउँछिन् ।
एक दाजु थिए, उनी बितिसकेका थिए । त्यसैले अविवाहित दिदीबाट किरियाकर्म गराउने कुरा भयो । तर, स्वास्थ्यका कारण दिदीले अनिच्छा गरिन् । ‘मैले मेरो आमाको दूध खाएकी छु । आमाप्रतिको श्रद्धा र सम्मानका लागि म नै किरिया बस्छु भनेर मैले अडान लिइरहेँ । अडान नलिएको भए मलाई किरियाकर्म गर्न दिइँदैनथ्यो । त्यसमा मामाले साथ दिनुभयो,’ मेरी साथीले भनिन् ।
निश्चय पनि परिवर्तनका लागि आफैँले आँट गर्नुपर्छ । आवाज उठाउनुपर्छ । साहस बटुल्नुपर्छ । तर, सामाजिक मूल्य मान्यताका नाममा हुँदै आएका विभेद हटाउन भोग्नेको मात्र होइन, अरुको दायित्व पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
एक त आमा बितेको पीडा, त्यसैमाथि किरिया बस्छु भन्दा झेल्नुपरेको मानसिक कष्टले उनमा कताकता डर पनि पैदा भइरहेको थियो । उनले त्यसबेलाको अनुभूति सुनाइन्, ‘फेरिफेरि पनि फेदाङ्मा चाहिन्छ । अरु बेला आइदिएनन् भने के गर्ने होला भन्ने डर पनि हुँदो रहेछ । तर, जहाँबाट खोजेर भए पनि साथ दिने अर्को फेदाङ्मा ल्याउँछु र किरिया बस्छु भन्ने निश्चय गरिसकेकी थिएँ ।’
पक्कै पनि मृत्युसंस्कार संवेदनशील विषय हो । आ–आफ्नो आस्था र विश्वासको कुरा हो । यो हाम्रो मनोभावनासँग जोडिएको हुन्छ । मृत्युपछि आत्माले शान्ति पावस्, स्वर्गमा बास होस् भन्ने हुन्छ । यो लोकबाट परलोकमा शान्तिपूर्वक पुर्‍याउने विश्वासमा वर्षौंदेखि छोराले गर्दै आएको मृत्युसंस्कार परम्पराविपरीत गर्दा आत्मा भड्‌किने हो कि, दुःख पाउने हो कि भन्ने भय/त्रास हुन सक्छ । त्यसैले कतै आफन्त, कतै समाज वा कतै पुजारीले नै असहमति जनाएको पनि पाइन्छ । तर जहाँ पुरेत, आफन्त र समाज सकारात्मक र विवेकशील हुन्छन्, त्यहाँ छोरी चाहे विवाहित हुन् वा अविवाहित, उनीहरूलाई सामाजिक संस्कारका नाममा विभेद र निषेध गरिँदैन ।
पहिलेपहिले दाहसंस्कारमा जाँदा मलामी खाली खुट्टा जान्थे । खाली खुट्टा जानुपर्छ भनिन्थ्यो । शवलाई बासी राख्न हुन्न भनिन्थ्यो । अहिले विदेशमा सन्तान हुनेका आमाबुबा बित्दा तिनको शव, सन्तान नआउञ्जेल अस्पतालमा राखिन्छ । दाह संस्कारका लागि विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्ने कल्पना कसले गरेको थियो होला र ?
छोरीको कमाइ खान हुँदैन, अझ विवाहित छोरीको घरमा त पानीसमेत पिउनु हुँदैन, छोरीको घरमा प्राण जानु पाप हो भनिन्थ्यो । तर अहिले छोरी (विवाहित हुन् वा अविवाहित) ले कमाएर बुबाआमालाई सघाइरहेका हुन्छन् । बिरामी हुँदा स्याहार र उपचार गराइरहेका हुन्छन् । मर्दापर्दा किरिया खर्चका लागि समेत माइतीलाई सघाइरहेका हुन्छन् । छोरा नहुँदा मात्र होइन्, छोरा भएरै पनि विवाहित छोरीको घरमा बुबाआमाले बुढेसकाल बिताइरहेका पनि छन् । छोरीकै घरमा प्राण त्यागेका पनि छन् ।
बाँचुञ्जेल सन्तानबाट माया र सम्मान पाए यही धरती, यही जीवन स्वर्ग हो । बाँचुञ्जेल हेला, बेवास्ता अनि अपमान भोगेर नारकीय जीवन जिउन बाध्य भए भने मरेपछिको स्वर्गको के महत्त्व ? कसले देखेको छ र मरेपछिको स्वर्ग ?
बुबाआमाको मृत्युसंस्कार छोराले नै गर्नुपर्छ, आफ्नो छोरा नभए दाइभाइका छोराले गर्नुपर्छ, त्यो पनि नभए आ–आफ्नो चलन संस्कारअनुसार अरु कसैलाई खोजेर गराउनुपर्छ भन्ने चलन वर्षौंदेखि हाम्रो समाजमा चल्दै आएको छ । यसलाई तोड्दै छोरीहरूले पनि मृत्यु संस्कार गर्न थालेका छन् । यो स्वीकार्य र सामान्य बन्दै गइरहेको छ, जुन सकारात्मक छ ।
तर विवाहित छोरीले आफ्ना स्वर्गीय आमाबुबाको काजकिरिया गर्छु भन्दा अहिले पनि त्यति सहज रूपमा लिएको पाइँदैन । अर्काको घर र कुलमा गइसकेकाले गर्नुहुँदैन भनेर रोक्न खोजिन्छ । भनिन्छ– प्रश्नमा ठूलो तागत हुन्छ । विवाहित छोरीले आफ्ना आमाबुबाको किरिया गर्न किन हुँदैन भन्ने प्रश्न नगरेको भए शायद विनिता रञ्जित र मेरी साथीलाई आफ्नी आमाको मृत्यु संस्कार गर्न दिइँदैनथ्यो ।
निश्चय पनि परिवर्तनका लागि आफैँले आँट गर्नुपर्छ । आवाज उठाउनुपर्छ । साहस बटुल्नुपर्छ । तर, सामाजिक मूल्य मान्यताका नाममा हुँदै आएका विभेद हटाउन भोग्नेको मात्र होइन, अरुको दायित्व पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसोभन्दा समयअनुसार बिस्तारै परिवर्तन भइहाल्छ नि भन्नेहरू पनि छन् । परिवर्तन एक रातमै हुन्छ र ? यस्तो प्रश्न गर्ने पनि हुन्छन् । विभेद अन्त्यका लागि समय कुर्ने हैन, यो मानवीय व्यवहार हो वा अमानवीय हो भनेर आफूले आफैँलाई प्रश्न गर्न र उत्तर खोज्नका लागि धेरै समय कुर्नुपर्दैन । त्यो हाम्रै हातमा छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २१, २०७८, ०७:००:५१